ရန်ကုန် အတွက်ပဲ အဓိက မှာယူထားတဲ့ ကိုဗစ်အမြန်စစ် ကိရိယာတွေနဲ့ ဦးစားပေး စစ်ပေးမည့်သူများ – Let Pan Daily
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံက မှာယူထားသည့် ကိုဗစ် ရောဂါပိုး ရှိ ၊ မရှိ လျှင်မြန်စွာစစ်ဆေးပေးနိုင်မည့် Test Kit (စမ်းသပ်ကိရိယာအစုံ)များသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွက် အဓိကမှာယူထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာရေး နှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒေါက်တာသန်းနိုင်စိုးက ပြောပါတယ်။ “လောလောဆယ် ရန်ကုန်တိုင်းအတွက်ပဲ လျာထားသေး တယ်ခင်ဗျ။ ရန်ကုန်တိုင်း အတွက်ပဲ လတ်တလော အစီအစဉ်ရှိပါသေးတယ်။ ကျန်တဲ့ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ဒေသကြီးတွေကို တိုးချဲ့ဖို့ အစီအစဉ်ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ ထပ်မံပြီးပြောကြားမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဒေါက်တာ သန်းနိုင်စိုးက ပြောပါတယ်။
၎င်း Test kit များ ကို တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ မှ အခုရေ နှစ်သိန်းမှာယူထားပြီး စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်တွင် အခုရေ ခြောက်သောင်း၊ စက်တင်ဘာ ၂၈ရက်နေ့တွင် အခုရေ တစ်သိန်းလေးသောင်းထပ်မံရောက် ရှိခဲ့ကြောင်းနှင့် ယနေ့(စက်တင်ဘာ ၂၉ရက်)တွင် တောင်ကိုရီးယားအစိုးရက လှူဒါန်းသည့် Test kit ငါးထောင် ထပ်မံရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပါတယ်။ Test Kit များအား ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီး အဆင့်ရှိသည့် ဆေးရုံများတွင် ဦးစွာလုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး မြို့နယ်အဆင့် ဆေးရုံများတွင် ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ လုပ်ဆောင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။. ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံ ကြီး၊ ရန်ကုန်အထွေထွေရောဂါ ကုဆေးရုံသစ်ကြီး၊ ရန်ကုန်အ နောက်ပိုင်းဆေးရုံ၊ မြောက်ဥက္က လာပ၊အင်းစိန်၊ လှိုင်သာယာ၊ သန်လျင် နှင့် သင်္ဃန်းကျွန်း စသည့် ဆေးရုံကြီးကိုးခု၌ ယနေ့(စက်တင်ဘာ ၂၉ရက်)တွင် စတင်လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဒေါက်တာသန်းနိုင်စိုး က ပြောပါတယ်။
“ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ ဆေးရုံကြီး (၉) ရုံပေါ့နော်။ ဒီနေ့စပြီး တော့ ခွဲတမ်း ရှိတယ်ဗျ သူက။ ရာရှင်(Ration) အလိုက် စစ်ဆေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ ဒီ Target အုပ်စုတွေကို အရင်ဆုံးစစ်ဆေး မှာဖြစ်ပါတယ်။ Target အုပ်စုမှာပါတာတော့ နံပါတ်တစ်က ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအုပ်စုတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အနီးကပ်ဆုံးထိတွေ့နေရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဗပါ့နော်။ သူတို့မှာ ပိုးမရှိတော့မှ သူတို့မိသားစုတွေလည်း မရှိမှ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ချမ်းသာနဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ နံပါတ် နှစ်ကတော့ PUI လို့ခေါ်တဲ့ စောင့်ကြည့်လူနာတွေပေါ့။
ဒီလူနာတွေကလည်း မြန်မြန်စစ်နိုင်လေလေ သူတို့အတွက်က ကောင်းလေလေပေါ့။ တတိယမြောက်ကတော့ အနီးကပ်ဆုံးထိတွေ့ထားတဲ့ သူအုပ်စုပေါ့နော်။ အဲ့တော့ ဒီအုပ်စုတွေကို စစ်ဆေးပြီး တော့ ရရှိလာတဲ့အဖြေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ ထပ်မံပြီး ဒီထက်ကျယ်ပြန့်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေကိုလည်း အဆင့် လိုက်အပိုင်းလိုက်ပေါ့နော် ။ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ လမ်းညွှန်မှု၊ ဗဟိုကော်မတီရဲ့ လမ်းညွှန်မှုအတိုင်း ဆက် လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဒေါက်တာသန်းနိုင်စိုးက ပြောပါတယ်။ ၎င်း Test Kit များသည် ရောဂါပိုးရှိ၊မရှိ မြန်မြန်စစ်ဆေးနိုင်သည့် အတွက် ပိုးရှိသူ ပိုမိုများပြားစွာတွေ့ လာမည်ဟု နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင် ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောဆိုထားပါတယ်။ စက်တင်ဘာ ၂၉ရက်နေ့ အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ ကိုဗစ် ရောဂါ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံသည် ယခင်နံပါတ် ငါးနေရာသို့ ရောက်ရှိနေရာမှ ယခုတွင် နံပါတ် လေး နေရာသို့ ရောက်ရှိနေကြောင်း သိရပါတယ်။
ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက မွာယူထားသည့္ ကိုဗစ္ ေရာဂါပိုး ရွိ ၊ မရွိ လွ်င္ျမန္စြာစစ္ေဆးေပးႏိုင္မည့္ Test Kit (စမ္းသပ္ကိရိယာအစုံ)မ်ားသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ အဓိကမွာယူထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရး ႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာသန္းႏိုင္စိုးက ေျပာပါတယ္။ “ေလာေလာဆယ္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြက္ပဲ လ်ာထားေသး တယ္ခင္ဗ်။ ရန္ကုန္တိုင္း အတြက္ပဲ လတ္တေလာ အစီအစဥ္ရွိပါေသးတယ္။ က်န္တဲ့ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ေဒသႀကီးေတြကို တိုးခ်ဲ႕ဖို႔ အစီအစဥ္ရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ထပ္မံၿပီးေျပာၾကားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာ သန္းႏိုင္စိုးက ေျပာပါတယ္။
၎ Test kit မ်ား ကို ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ မွ အခုေရ ႏွစ္သိန္းမွာယူထားၿပီး စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ အခုေရ ေျခာက္ေသာင္း၊ စက္တင္ဘာ ၂၈ရက္ေန႔တြင္ အခုေရ တစ္သိန္းေလးေသာင္းထပ္မံေရာက္ ရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယေန႔(စက္တင္ဘာ ၂၉ရက္)တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရက လႉဒါန္းသည့္ Test kit ငါးေထာင္ ထပ္မံေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ပါတယ္။ Test Kit မ်ားအား ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္ရွိသည့္ ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ ဦးစြာလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ ဒုတိယအဆင့္အေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။. ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံ ႀကီး၊ ရန္ကုန္အေထြေထြေရာဂါ ကုေဆး႐ုံသစ္ႀကီး၊ ရန္ကုန္အ ေနာက္ပိုင္းေဆး႐ုံ၊ ေျမာက္ဥကၠ လာပ၊အင္းစိန္၊ လႈိင္သာယာ၊ သန္လ်င္ ႏွင့္ သဃၤန္းကြၽန္း စသည့္ ေဆး႐ုံႀကီးကိုးခု၌ ယေန႔(စက္တင္ဘာ ၂၉ရက္)တြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာသန္းႏိုင္စိုး က ေျပာပါတယ္။
“ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ ေဆး႐ုံႀကီး (၉) ႐ုံေပါ့ေနာ္။ ဒီေန႔စၿပီး ေတာ့ ခြဲတမ္း ရွိတယ္ဗ် သူက။ ရာရွင္(Ration) အလိုက္ စစ္ေဆးေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က စစ္ေဆးတဲ့အခါမွာ ဒီ Target အုပ္စုေတြကို အရင္ဆုံးစစ္ေဆး မွာျဖစ္ပါတယ္။ Target အုပ္စုမွာပါတာေတာ့ နံပါတ္တစ္က က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းအုပ္စုေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အနီးကပ္ဆုံးထိေတြ႕ေနရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြဗပါ့ေနာ္။ သူတို႔မွာ ပိုးမရွိေတာ့မွ သူတို႔မိသားစုေတြလည္း မရွိမွ စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္ခ်မ္းသာနဲ႔ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္ေပါ့ေနာ္။ နံပါတ္ ႏွစ္ကေတာ့ PUI လို႔ေခၚတဲ့ ေစာင့္ၾကည့္လူနာေတြေပါ့။
ဒီလူနာေတြကလည္း ျမန္ျမန္စစ္ႏိုင္ေလေလ သူတို႔အတြက္က ေကာင္းေလေလေပါ့။ တတိယေျမာက္ကေတာ့ အနီးကပ္ဆုံးထိေတြ႕ထားတဲ့ သူအုပ္စုေပါ့ေနာ္။ အဲ့ေတာ့ ဒီအုပ္စုေတြကို စစ္ေဆးၿပီး ေတာ့ ရရွိလာတဲ့အေျဖေပၚမွာမူတည္ၿပီးေတာ့ ထပ္မံၿပီး ဒီထက္က်ယ္ျပန္႔တဲ့စစ္ေဆးမႈေတြကိုလည္း အဆင့္ လိုက္အပိုင္းလိုက္ေပါ့ေနာ္ ။က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ လမ္းၫႊန္မႈ၊ ဗဟိုေကာ္မတီရဲ႕ လမ္းၫႊန္မႈအတိုင္း ဆက္ လက္ေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာသန္းႏိုင္စိုးက ေျပာပါတယ္။ ၎ Test Kit မ်ားသည္ ေရာဂါပိုးရွိ၊မရွိ ျမန္ျမန္စစ္ေဆးႏိုင္သည့္ အတြက္ ပိုးရွိသူ ပိုမိုမ်ားျပားစြာေတြ႕ လာမည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုထားပါတယ္။ စက္တင္ဘာ ၂၉ရက္ေန႔ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ကိုဗစ္ ေရာဂါ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခင္နံပါတ္ ငါးေနရာသို႔ ေရာက္ရွိေနရာမွ ယခုတြင္ နံပါတ္ ေလး ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။
ဖောင်ကြီး ကိုဗစ်ဆေးရုံကြီး မှာ နွေးထွေးမှုတွေ အပြည့် နဲ့ ပီတိ ဖြစ်ခဲ့ ရတဲ့ နေ့စွဲများ…